Intel: 50 Iminyaka Ngaphansi koMthetho Gordon Moores (IZINDABA)
Sethula kuwe entsha futhi olusha Game Tycoon 2 CD Key Generator.. Sikhetha ukudala le Tycoon Game 2 Keygen kuya ...
Subnautica Keygen (CD Free Keys)
ProKeygens Hack ithimba ngeqholo samanje kuwe entsha futhi olusha Subnautica Keygen Ithuluzi ....
Thwebula Uyindawo Dead Steam Code Generator
Thwebula Uyindawo Dead ikhodi umusi generator ithuluzi futhi zikhiphe siqu cd khulula ukhiye wakho ....
Thwebula Stasis zakamuva 2015 umkhiqizo generator key and zikhiphe siqu ukusebenza khulula cd ukhiye wakho ....
Sethula kuwe entsha futhi olusha Gone Ikhaya CD Key Generator ....
System Mechanic 16 Generator Key
Sawubona abasebenzisi PC, namuhla sinawo ithuluzi yakamuva isebenze okufushane umnyuziki System Mechanic 16...
Thwebula yakamuva grip cd generator key futhi zikhiphe siqu kusebenze khulula ukhiye wakho cd ....
Mass Effect Andromeda Serial Generator Key
Download Mass Effect Andromeda ukhiye serial generator ithuluzi futhi zikhiphe siqu cd khulula ukhiye wakho ....
Clash of kwamaqembu likaHack yilelo elaligqokwe - Ukukopela
Uma ufuna ukuxabana of kwamaqembu amagugu mahhala, elixir negolide, uke uye endaweni kwesokudla…Thola-Izibuko eziklayekile babe develo ...
Posted in Izindaba	2015-04-24
Eminyakeni lengemashumi lasihlanu leyengca ngolunye usuku, Gordon Moore ezikhishwe ifayela Electronic kumadivayisi ncwadi osesikhundleni “Kuminyana Izingxenye Ngini ezimbotsheni Circuits Kuhlanganiswe.” 10 Eminyakeni ngemuva kokushicilelwa kokuqala, umqondo yena wethule ngabe waziwa njengomuntu “Law Moore sika,” futhi liye laba nethonya elibonakalayo ekuthuthukisweni emisha kuhlaziywa.
Ngaleso sikhathi Moore wayebhalela, option ephezulu ngokukhiqiza zobuchwepheshe lithathwa ayihlanganisi Semiconductors silicon-based. Ezenye amasu, ezifana usebenzisa izingxenye ezahlukene ngamunye, yayithandwa more, futhi kancane ebizayo. Moore sika isibikezelo kuqala kwaba ukuthi lokhu kwakuyoba kuyawushintsha, lapho usebenzisa Semiconductor edidiyelwe izifunda ngabe bagcina ndlela ephezulu ngokukhiqiza izifunda eyafakwa.
“Amadivaysi Semiconductor amathemba onomqondo kuphela okwamanje lapho for izakhi esebenzayo nezifunda edidiyelwe,” Said Moore. “In 1970, bangakunaki Ekhiqizako per okuyingxenye kungalindeleka ukuba nje okweshumi ngezindleko samanje.”.
Moore wathi semiconductor eyafakwa izifunda kuyodinga 50 izakhi ngaphakathi ukuba kubiza ngempumelelo. Ngaleso sikhathi, the isivuno kusukela sisebenzisa izakhi eziningi umuntu oyedwa bekungadingeka wehlise ngokwanele ukuze abasebenzisa a wesifunda semiconductor olulodwa lithathwa kwaba ngezindleko kangcono.
Njengoba semiconductor ubuchwepheshe isihambile, the ezihlukahlukene izakhi ezingase ephansi kukhiqizwa on a wesifunda semiconductor kuhlanganiswe ngabe ukwandisa, ngenkathi izindleko baphonse. Moore wathi kungakapheli iminyaka emihlanu, 1,000 izingxenye wesifunda ngamunye kungabandi njengoba bekungalindeleka, futhi One lelishumi the ezihlukahlukene izingxenye ethengekayo semiconductor lithathwa izifunda kungase lifinyelele 65,000.
Lokhu kwaba sibikezelo yesibili Moore sika, futhi wayezoba renter main of Law Moore sika. Izindleko ngokukhiqiza semiconductor lithathwa izifunda ngabe wehlise, njengoba onembile noyinkimbinkimbi okuthuthukisiwe.
“Kushuba for okungenani ingxenye izindleko uye ngempela kuthakwe ngesilinganiso cishe elementi 2 njalo ngonyaka. Ngokuqinisekile phezu short-term lokhu rate kungalindeleka ukuba uqhubeke, uma kungenjalo ukwandisa. Esikhathini eside, izinga umfutho engazethembi kancane more, nakuba kungekho isidingo sokucabanga ngokuqinisekile ngeke aqhubeke cishe njalo okungenani 10 iminyaka,” Said Moore.
Ngesikhathi wadedelwa leli fayela, Moore esasebenza njengomhleli umcwaningi Fairchild Semiconductor, Nokho kamuva wayezonikeza on isithunywa co-wathola omunye ibhizinisi esivelele kunazo zonke emhlabeni ohlelweni computer: Intel.
Ngemuva co-ekusungulweni Intel, Moore wafakwa esimweni lapho kwadingeka control ngokuqondile futhi kungenzeka kugqugquzelwe emisha ephakeme kanye nentuthuko. Intel uye empeleni wenza yonke imizamo ukugcina ijubane, futhi kungaba kusuka entuthukweni zemvelo (njengoba Moore forecasted) noma encintisana nazo Intel, abanye eziningi emakethe computer ziye empeleni wenze okufanayo ngqo futhi wazikhandla ukuze athuthukise futhi ukusungula nobuchwepheshe.
Uma kuqhathaniswa 4004, the microprocessor sokuqala ngqa esungulwe Intel e 1971, a-sanamuhla 22nm processor sinamakhasi angaphezu kuka 4,000 Izikhathi nekusebenta. Ngesikhathi esifanayo, Transistor ngayinye isebenzisa esingaphansi 5,000 izikhathi amandla, futhi intengo uye empeleni kwehla ngamaphesenti angaba ngu isici 50,000.
Ukuze bakhumbule the50th lwesikhumbuzo Law Moore sika, Intel ezikhishwe amawebhusayithi eziningana elalinikezelwe umlando Intel nokuthi uMthetho Moore sika kuye kwanezela ekuthuthukisweni ibhizinisi. In ividiyo, Moore futhi saxoxa izibikezelo zakhe futhi ukumangazwa kwakhe kude kangakanani empeleni oye.
Today, Semiconductor eyafakwa izifunda awasuki, Cishe konke esisebenzisa ngayo lolo isebenzisa amandla kagesi, ezifana okukude, Amathelevishini, phones, zekhompyutha, izimoto, Isikhulumi izinhlelo, game aduduze, ukubukwa, amawashi, namanye amadivayisi eziningi. Kuze kube manje, UMthetho Moore sika ofake isicelo. Uhlobo It isize kwanamuhla emisha, futhi njengoba computer systems nekutfutfukisa, singalindela ukuthi kuhlale ukuba ibutho ovelele.